ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ဘုရင့်နောင်ရဲ့ ၁၆ ဆက်မြောက် မျိုးဆက်။ (မြန်မာ-မာမ-လူမျိုး) ~ ဒီမိုဝေယံ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ဘုရင့်နောင်ရဲ့ ၁၆ ဆက်မြောက် မျိုးဆက်။ (မြန်မာ-မာမ-လူမျိုး)
Bama Thar (ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်)
ဘုရင့်နောင်ရဲ့ ၁၆ ဆက်မြောက် မျိုးဆက်ဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့မှာ မဟာရာဂျာစော်ဘွားတွေလို မဟာရာဂျာ စော်ဘွားအဖြစ်နေထိုင်ပါတယ်။ ၁၅၉၉မှာ နန္ဒဘုရင်ရဲ့သားတော် မောင်ရွှေဖြူဟာ စစ်တကောင်းဒေသမှာ တာဝန်ကျခဲ့ပါတယ်။ ဘိုးမောင်းဆက်အဖြစ် ယနေ့တိုင် လူ ၂ သိန်းရှိသော ရှေးကတည်းက ဆွေစဉ်မျိုးဆက် နေထိုင်ခဲ့ကြသော မြ...န်မာ၊ မွန်၊ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား အများအပြားကို စစ်တကောင်းတောင်ရိုးမှာ အုပ်စိုးလျှက်ရှိပါတယ်။ ဘိုးမောင်း(BOHMONG) ၁၅ ဆက်မြောက်ဟာ ဓာတ်ပုံမှာပါသော မင်းအောင်ရွှေဖြူ ဖြစ်ပြီး ဘုရင့်နောင်ရဲ့ ၁၆ ဆက်မြောက် မျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။
မာမလူမျိုးဟာ မြန်မာလူမျိုး အသံထွက်မှ ဆင်းသက်လာတာပါ။ အခုအချိန်မှာတော့ ရခိုင်စကားပဲ အဓိက ပြောတော့ပါတယ်။ ဘင်ဂလားဒေ့ရှ် လူမျိုးစုစာရင်းမှာ အသေအချာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ သမိုင်းကြောင်းကို ဆက်စပ် လေ့လာလိုပါက အောက်ပါလင့်များမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံများကိုလည်း အဲဒီမှ ကူးယူထားပါတယ်။
[The word “Marma” originates from the Burmese word “Myanma”, which means “Burmese Nationals”and is pronounced as “Marma”by the people of the CHT. In other explanation the word “Marma” is derived from the Burmese word “Mraima” which means “Being Born”. Hence, the predecessors of the Marma tribes were from Burma and as such, they came to be known as “Marma” or “Mraima”. ]
ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်တွင် အရက်အတူသောက်ပြီး စကားများရာမှ လူသတ်မှုဖြစ်ပွား
သာစည်မြို့မှ ကောင်းဇော်ဟိန်း(K Z H)စက်သုံးဆီ ဆိုင်...
ထားဝယ်မြို့အတွင်း မိုးအဆက်မပြတ် ရွာသွန်းမှုကြောင့် ...
အငြိမ်းစားဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရဦးတင်ဦး၏ စစ်မှုထမ်းဘ၀...
ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံတော်ဘာသာ ပြန်ဋ္ဌာန်းခြင်း ၅၁ နှစ်မြေ...
“စာရေးသူ၏ အာဘော်သာ ဖြစ်ပါသည်”(အပိုင်း-၂) ဆောင်းပါ...
သာစည်မြို့ ပြည်သူ့အကျိုးဆောင်ကွန်ယက် ဓာတ်ဆီဆိုင်ေ...
မြိတ်မြို့တွင် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၃နှစ်ခန့်က NL...
ဇူလိုင်၂၉ ရက်နေ့ ဗြဟ္မစိုရ်ခြေလှမ်း ဒိုင်ယာရီများ.....
ဝိတ်ပြားရှင်နှင့် နှစ်ကျပ်ခွဲရွာမှ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်...
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ဘုရင့်နောင်ရဲ့ ၁၆ ဆက်မြောက် မျိုးဆက...
သစ်တင်ကားကို ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ ရဲတပ်ကြပ် အောင်သန်းထိုက...
မျိုးချစ်မြန်မာလူငယ်များ အဖွဲ့၏ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ေ...
နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး၏ လက်နဲ့ရေးသော အဆိုအမိန့်အားေ...
တနသာင်္ရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အစုရှယ်ယာ ပါဝင်သော ထားဝယ...
ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်း ရံပုံငွေ အလှူ ကာတွန်းပြပွဲ...
“စာရေးသူ၏ အာဘော်သာ ဖြစ်ပါသည်” (အပိုင်း-၁) (ဆောင်းပ...
ဝိတ်ပြားရှင် ဦးအောင်သိန်းလင်း ငြင်းချက်ထုတ်နေချိန...
လူငယ်တွေကို ယုံပါ ဂျာနယ်လစ် ဆိုတာ လူမှု အသိုက်အဝန်း...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ပထမဆုံး တင်သွင်းသော...
ညောင်ကုလား ကျည်းပေါင်းတရုတ် ကဗျာရှင်(နေရဲနီ)
ဇူလိုင်လ ၂၄ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့တွင် မိုးသက်လေပြင်း...
ကဗျာဆရာများ သမဂ္ဂမှ ပြုလုပ်တဲ့ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင် ...
မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့BRO Learning Center...
ရပ်ကွက်လူမိုက်နှင့် တူသည့် မြန်မာအစိုးရ... (ရေးသား...
သစ်တောဦးစီးဋ္ဌာန ခေတ္တညွှန်ချုပ် (ဗိုလ်မှူးကြီးငြိမ်း...
ဖြစ်ကြောင်းရယ် ကုန်စင် မြိတ်မြို့တစ်ခွင်... (တိုင်...
စာပေစီစစ်ရေးက ဖော်ပြခွင့်မပြုတဲ့ "Newday News "ဂျာ...
ပိဿလေး ဖွတ်ပစ်... သို့မဟုတ် ပိဿလေး ဖွတ်မ..
မနစ်နာသင့်ဘဲ နစ်နာနေရတဲ့ နိုင်ငံခြားဘာသာ တက္ကသိုလ်မ...
မီးပင်လယ်ခရီး အမှတ်စဉ် - ၃..
စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ ဗြဟ္မစိုရ် ခြေလှမ်းတစ်လှမ်း...
တက္ကသိုလ် ဆရာ၊ ဆရာမများအား တာဝန်နှင့် မသက်ဆိုင်သည်...
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကနီမြို့နယ် တရားသူကြီးဦးမြ...
ရခိုင်မြောက်ပိုင်းဟာ အာရှရဲ့ ကိုဆိုဗို ဖြစ်လာနိုင်...
ပြည်သူ့အပေါ် မငဲ့ညှာသော ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန (တိုင်...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (မင်းဘူးမြို့) (၆၅)န...
ပညာရေးဝန်ထမ်းတဦးမှ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ထံ ...
ယနေ့ကျင်းပ ပြုလုပ်တဲ့ အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်း...
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများကို မေ့မထားတဲ့ San Franci...
ယနေ့ ကျရောက်တဲ့ (၆၅)နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနာ...
မွန်ပြည်နယ် ပေါင်မြို့၊ ပေါင်းရပ်ကွက်မှာ ပြုလုပ်တဲ...
မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး တကောင်းဒေသ အတွင်းတရားမ၀င် ကွ...
မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့နယ် အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအန...
"ဧရာဝတီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းအောင်နဲ့ မိုးကျေ...
မွန်ပြည်နယ် ရေးမြို့နယ်နှင့် နေပြည်တော် ပျဉ်းမနား...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (မွန်ပြည်နယ်)ရဲ့ ၆၅န...
ယနေ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းညွန့်၏ ရ...
ဆန်ရှင်ရုပ်သိမ်းရေး အဆိုတင်သွင်းမှု ဘဘဦးဝင်းတင်နဲ့...
လောင်းလုံမြို့နယ် မောင်းမကန် ကျေးရွာသားများမှ ပြည်...
မောင်းတော အခြေစိုက် နစကမှူးအား ရေကြည်အိုင်သို့ ခေါ်...
ယနေ့ ထောက်ကြန့်မြို့နယ်တွင် လယ်မြေအသိမ်းခံရသော တော...
လုပ်ကြံ ပေးပို့သော သတင်းမှား ဓာတ်ပုံများဖြင့် ဘာသာ...
ရခိုင်ပြည်နယ် ခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၈၈မျိုးဆက်ကျော...
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခင်ဦးမြို့နယ်၊ အင်တိုင်းေ...
ဘုန်းနှင့် ကံနှင့် သဇင်နီ (၂) (ကဗျာရှင် နေရဲနီ)
ပန်းတောင်းမြို့နယ် တောင်သူလယ်သမား အရေးနှင့် ပတ်သက်...
ခိုးဝင်လာသည့် ရိုဟင်ဂျာများကို UNHCR သို့အပ်နှံပြီ...
ရခိုင်ပြည်နယ်က တိုင်းရင်းသား ရခိုင်ပြည်သူတွေ အရေးက...
လွှတ်တော်ဥက္ကဌကြီး သူရဦးရွှေမန်းအမည် အလွှဲသုံးစားပြုေ...
မိချောင်းမျက်ရည် (ကဗျာရှင် နေရဲနီ)
ကလောမြို့နယ် ဘော်ဆိုင်းကျေးရွာမှ တရုတ်ပိုင် ခဲသတ္တု...
ယနေ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာတ...
အတွင်းသိတဦးရဲ့ စပ်မိစပ်ရာ ပေးစာကဏ္ဍ...
ရွှေညောင်မြို့ တွင် နေအိမ်၁၈လုံးပါ မြေနေရာအား တပ်ပိ...
တောင်ကြီးမြို့တွင် 7th July အခမ်းအနား မပြုလုပ်ရန် ...
သာစည် မြို့လယ်ခေါင်တွင် စက်သုံးဆီဆိုင် ထားရှိခြင်း...
ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ ဗကသကျောင်းသားများရဲ့ (၇)ရက်...
ယာယီထိန်းသိမ်းခံရသော ဗကသကျောင်းသားအချို့ ပြန်လည်လွ...
ယနေ့ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ရုံးခန်းမှာ ကျင်းပတဲ...
ယမန်နေ့ ညက ဗကသ ကျောင်းသားများ ထိန်းသိမ်းခံရမှုနှင့်...
ဗကသ ကျောင်းသားအချို့ ယာယီထိန်းသိမ်းခံရ
ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဆောက်အဦး ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးမှု တရားခံ...
“အနီးမြင် အဝေးထင် တက်တက်စင်အောင်မလွဲဖို့” ဆောင်းပ...
ကုလသမဂ္ဂကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့(ယူနီဆက်) သံတမန် နာမည...
ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း) ဆီဆိုင်မြို့ နယ်တွင် ဆ...
မင်္ဂလာဒုံ မြို့မ ရပ်ကွက် ပညာဒါန ကျောင်းဖွင့်ပွဲ အခမ...
ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ဒုက္ခရောက်နေသူ ပြည်သူများအတွက် သြစေ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လူငယ် အဖွဲ့ဝင်များနှ...
ယနေ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပြုတဲ့ သူများထဲမှာ နိုင...
သမဂ္ဂအဆောက်အဦး ပြန်လည် တည်ဆောက်ခွင့်ရရှိရေးအတွက်ြ...
ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ဒုက္ခသည် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများအား...
လွန်ခဲ့သော နှစ်များအတွင်းကတည်းက အယ်လ်ခိုင်ဒါနဲ့ စပ...